वाम एकताको नयाँ अध्याय | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / सम्पादकीय / वाम एकताको नयाँ अध्याय
वाम एकताको नयाँ अध्याय
Posted by: युगबोध in सम्पादकीय February 21, 2018	0 97 Views
ने पालमा राजनीतिक दलहरुको इतिहास त्यति लामो छै न । लामो समयसम्म दास युग र सामन्ती प्रथाबाट गुज्रिएको ने पाली समाजमा सचे तरुपमा राजनीतिक अधिकारको आवाज उठ्न थाले को एक शताब्दी पनि पुगे को छै न । आधुनिक राजनीतिको इतिहास हे र्दा विसं १९८८ सालमा प्रचण्ड गो रखा समूहको गठन हुँदै पहिलो पटक १९९३ सालमा प्रजातन्त्र परिषद् ने पाल नामको पहिलो दल गठन भएको पाइन्छ । यो दल बने पछि राणाबिरो धी आन्दो लन उत्कर्षमा पुग्यो भने यसकै आसपासमा गठन भएका मुख्य दुई दलले अहिले पनि ने पाली राजनीतिमा अगुवाइ गरिरहे का छन् । पछिल्लो समयमा धे रै दलहरु बने पनि प्रायः सबै दल पुराना ती दुई दलकै उत्पादन र सहउत्पादन (बाइ प्रो डक्ट) स् वरुप बने का दलहरु अहिले अस् ितत्वमा छन् । २००३ सालमा स् थापना भएको राष्ट्रिय कांग्रे स २००६ सालमा ने पाली कांग्रे स बन्यो , अहिले पनि पुरानो को दलको रुपमा स् थापित छ । त्यस् तै २००६ सालमा स् थापित भएको कम्युनिष्ट पार्टीका विभिन्न घटक एकता र विभाजनको आरो ह–अवरो ह पार गदैर् यहाँसम्म पुगे का छन् ।
ने पाली कम्युनिष्ट आन्दो लनको एकता र विभाजनको लामो श्रृंखलापछि अहिले प्रमुख दुई कम्युनिष्ट पार्टी ने कपा एमाले र ने कपा माओ वादी के न्द्र एकताको अन्तिम चरणमा पुगे का छन् । अस् ित राति उनीहरुले गरे को सातबुँदे सहमतिसँगै यी दुई दलबीचको एकता प्रक्रिया उत्कर्षमा पुगे को छ, जो पूरा भएपछि वाम एकताको एउटा अध्याय शुरु हुने छ । २००६ सालमा पुष्पलाल श्रे ष्ठ, निरञ्जन गो विन्द वै द्य, नारायण विलास जो शी र नरबहादुर कर्माचार्यले ने पाल कम्युनिष्ट पार्टीको स् थापना गरे का थिए । प्रजातन्त्र स् थापनापछि पनि यो दललाई राजनीति गर्न सहज भएन । २००९ सालमा डा. के . आई. सिंहको बिद्रो हपछि यो पार्टी प्रतिबन्धित भयो  । २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस् था शुरु भएपछि अरुजस् तै यो पार्टी पनि प्रतिबन्धित भइहाल्यो  । त्यसपछि कम्युनिष्ट पार्टीमा विभाजनको श्रृंखला शुरु भयो  । यो क्रम निरन्तर चल्यो  । बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस् र्थापना भएपछि फे रि एकताको प्रक्रिया पनि शुरु भयो  । एउटा धारको एकीकरण भएर एमाले बन्यो भने अकोर् धारको एकीकरणपछि एकताके न्द्र हुँदै माओ वादी बन्यो  ।
लामो टुटफूटको ऐ तिहासिक पृष्ठभूमि बो के का यी दुई दल अहिले एकता प्रक्रियामा जुटे का छन् । कुनै पनि राजनीतिक दल मिल्नु राम्रो हो  । त्यसमा अझ जुट्न हो इन फुट्न मात्र जाने को आरो प खे प्दै आएका कम्युनिष्ट घटकबीचको एकताको फरक सन्दे श जाने नै भयो  । यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा एकताले परिणाम ल्याउँछ भन्ने नै हो  । कुनै पनि दलको मूल्यांकन गनेर् भने को उसले अख्तियार गरे को नीति कार्यक्रमले हो  । ने पालका वाम घटकहरुले जे सुकै कार्यक्रम अघि सारे पनि उनीहरुको साझा बटमलाइन भने को कम्युनिष्ट घो षणापत्र नै हो  । उनीहरुले एकतापछि आफ्नो स् थापनाकालको घो षणापत्र कार्यान्वयनमा कत्तिको तदारुकता दे खाउँछन् र प्राथमिकतामा राख्छन्, यसमा नै उनीहरुको एकताको औ चित्य सिद्ध हुने छ । कुनै पनि घटनाक्रम साध्य हो इन, साधन मात्र हो  । साध्य त लक्ष हो , जो परिणाममा दे खिनुपर्छ । ने पाल कम्युनिष्ट पार्टीको घो षणापत्रमा प्रष्टसँग समानता र स् वतन्त्रताको परिकल्पना गरिएको छ । कम्युनिष्टहरुले भन्ने गरे को वर्गविहीन समाजको अहिल्यै नै परिकल्पना नगरे पनि कम्तिमा हरे क मान्छे लाई मान्छे को है सियत दिने गरी स् वतन्त्रता र समानताको यात्रामा अघि बढ्नसके कम्युनिष्ट एकीकरणको प्रयासले सार्थकता पाउने छ । त्यसखाले विचार, नीति, कार्यक्रम, संगठन र कार्यशै लीले मात्र यो यात्रा संभव हुने छ ।
Previous: एकता, बाध्यता र लचकता
Next: दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ट्राफिक सचेतना अभियान